Iyo iPhone XS inotengesa mushe, asi iyo iPhone 7 zvirinani | IPhone nhau
Iyo iPhone XS inotengesa mushe, asi iyo iPhone 7 iri nani
Iko kushoropodza nezve "mashoma" kuvandudzwa ayo anosanganisira iPhone XS achienzaniswa neiyo iPhone X anga achienderera kubva pazuva rekutanga kwayo. Zviripachena kuti shanduko haisati yave inonakidza seiya inomiririrwa muzuva rayo neiyo iPhone X, asi ndeyekuti Apple yatangazve nzira yakasiyiwa yeiyo "S" modhi yekutarisa kuvandudzwa kweIOS.
Zvisinei, Kunyangwe paine mashura akashata, zvinoitika kuti iyo iPhone XS iri kutengesa kunze uye zvirinani pane iyo iPhone X mumwedzi yayo yekutanga. Izvi zvinopesana nevaongorori uye ndizvo chaizvo zvakashamisa kushamisika munzira yekuti mutengi weApple akaita sei nekuvandudzwa kudiki kweiyo mureza.
Vanoongorora paShutterstocks vari kuitisa maakaundi avo ekuti iyo iPhone XS iri kutengesa sei. Zviripachena kuti kambani iri kuwana 7% yakawanda mari pamwe neiyo cast yeiyo iPhone XS uye iPhone XS Max pane iyo yakawanikwa pazuva rimwe chete gore rapfuura nekumisikidzwa kweiyo iPhone 8, iPhone 8 Plus uye iPhone X. Zvese izvi zvichitarisa izvo isu hatisati tine iyo iPhone XR pamusika, ingangove ichave iri Apple inotengesa zvakanyanya nekuda kwemutengo wayo nezvibvumirano nemakambani enhare. Ichi chinongova chimwe chete chitsauko mune yechinyakare nyaya nezve nei Apple isiri kuzotengesa terminal, uyezve zvakapesana zvinoitika ... sei?
Nekudaro, maererano nekutengesa, zvese zviripo kana zviteshi zvinotitorera isu nekushamisika, uye ndizvo mune dzidziso iyo iPhone 7 (2016 modhi) iri kudya 15,4% yekutengesa kwese, nepo iyo iPhone 7 Plus ichichengeta 12,73% yeiyo yakazara. Zviripachena kuti kubuda kwesitoko kuri kukonzera kuti vashandisi vazhinji vaone mune izvi zvekutengesa mukana wakakwana wekupinda zvakazara muIOS kuburikidza neterminal yatove neimwe nguva asi inokupa rinenge sezuva rekutanga, ngatirege kukanganwa kuti iOS 12 inoenderana ne masisitimu egore 2013 senge iyo iPhone 5s. Uye aya ndiwo maitiro Apple anoenderera nekugara mune yayo niche diki yevashandisi vanoda kubhadhara hombe mari yemafoni avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iyo iPhone XS inotengesa mushe, asi iyo iPhone 7 iri nani
Matanho manomwe anokosha eApple Watch
Apple inoramba kuti vashandisi vayo vanotambura kushora kubva kuChina